कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सूचना - Pabil News
असार १३ गते, २०७८ - १६:०७
प्रथम पटक प्रकाशन मितिः २०७८।०३।१३
धुृनिवेशी नगरपालिका, धादिङ र हेफर प्रोजेक्ट नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सामुदायिक उत्थान पद्धतीका लागि मञ्च (फोकस नेपाल धादिङ)द्वारा “कृषि तथा पशुवस्तु उत्पादन र बजारीकरण साझेदारी परियोजना”संचालनका लागि तपशिलमा उल्लेखित पदका कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएकाले यो सुचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।
१. आवश्कता सम्वन्धी विवरण :
क) पद : कार्यक्रम संयोजक
पद संख्या : १ (एक) जना
न्युनतम योग्यता र कार्यानुभवः
– कृषि÷भेटेनरी, समाजशास्त्र विषयमा स्नातकतहवासो सरह उतिर्ण गरी ३ वर्ष सामुदायिक विकास तथा बाख्रा, दुध, र तरकारीको मुल्यश्रृंखलामा काम गरेको अनुभव भएको ।
– योजनातर्जुमा, बजेट व्यवस्थापन, परियोजना कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मुल्याकंनको अनुभव, ज्ञान र सीप भएको ।
– सानाकिसान सवलिकरण तथा उद्यमशिल साझेदारी कार्यक्रम सम्बन्धि ज्ञान, सीप र अनुभव भएको ।
– कर्मचारी व्यवस्थापन तथा परिचालन, तालिम व्यवस्थापन र सहजिकरण, प्रतिवेदन लेखन – कृषि तथा पशु वस्तुमा आधारीत व्यवसाय तथा उद्यमशीलतामा महिला तथा यूवाहरुको सहभागिता र सामाजिक परिचालनमा विशेष दक्षता भएको ।
– स्थानीय सरकार र अन्य सरोकारवालासंग समन्वय र सहकार्य गरी कार्य गर्न सक्ने ।
– कम्प्युटर (micro-soft word, excel, power point, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
– कार्यक्रम संयोजक कम्तीमा ८० प्रतिशत समय अवधि परियोजना क्षेत्रमा बस्नुु पर्नेछ ।
ख) पद : प्राविधिक संयोजक
पद संख्या :१ (एक) जना
न्युनतम योग्यता र कार्यानुभव :
– भेटनरी विषयमा जेंटि.(JT) उत्तिर्ण गरी सम्बन्धीत विषयमा कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव भएको ।
– कृषि तथा पशुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा प्राविधिक तथा सिर्जनात्मक दक्षता भएको ।
– प्राविधिक तालिमको आयोजना, संञ्चालन तथा फिल्ड अनुगमन गर्न सक्ने ।
– कम्प्युटर(micro-soft word, excel, power point, internet) सम्वन्धी दक्षता भएको ।
– प्राविधिक संयोजक परियोजना क्षेत्रमा (field based)बस्नुपर्नेछ ।
ग) पद : लेखापाल
– वाणिज्य शास्त्रम १२ कक्षा उत्तिर्ण गरी कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव भएको ।
– लेखाका आधारभुत सिद्धान्तको विषयमा दक्ष ।
– कम्प्युटर सम्वन्धी दक्षता भएको । लेखा सफट्वयर सम्वन्धी अनुभवी ।
– लेखाप्रतिवेदन तयारी, तथ्याङ विश्लेषण, बजेट निर्माण सम्वन्धी ज्ञान भएको ।
– स्थानीय सरकारको लेखा प्रणाली सम्वन्धि अनुभव र ज्ञान सीप भएको ।
– बजेट निकासा तथा फर्छौट सम्वन्धि अनुभव र ज्ञान सीप भएको ।
– नियमित तथा आवश्यक्ता अनुसार परियोजना कार्यक्षेत्र भ्रमण तथा पालिकासंग समन्वय र सम्पर्क राख्न सक्ने ।
घ) पद : सामुदायीक सहजकर्ता
पद संख्या : ५ जना
– १०+२ वा सो सरह उत्तिर्ण गरी सामुदायिक विकास तथा बाख्रा, दुध, र तरकारीको मुल्यश्रृंखलामा कम्तीमा ३ वर्षको कार्यानुभव भएको ।
– स्वाबलम्वन समूह गठन तथा परिचालन सम्वन्धि अनुभव भएको ।
– स्वतन्त्ररुपले तालिम सहजीकरण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि अनुभव तथा ज्ञाान सीप भएको ।
– महिला तथा युवा सशक्तिकरण, समुह व्यवस्थापन र सामाजिक परिचालन सम्वन्धी दक्षता भएको ।
– कृषि तथा पशु उद्यमशिलता विकासको माध्यमबाट आयआर्जन गर्न समुदायलाई उत्प्रेरीत गर्न सक्ने विशेष ज्ञाान भएको ।
– धुृनिवेशी नगरपालिका क्षेत्रमा स्थाई बसोवास भएको हुनुपर्ने ।
२ दरखास्त दिने अन्तीम मिति :२०७८।०३।२० कार्यालय समय भित्र ।
३ परिक्षाको किसिम : लिखित, अन्तवार्ता र आवश्यकता अनुसार प्रयोगात्मक ।
४ दरखास्त बुझउने ठेगाना: सामुदायिक उत्थान पद्धतीका लागि मञ्च (फोकस नेपाल) नीलकण्ठ न.पा.३, धादिङ ।
५ ईमेल पठाउने ठेगाना : focusnepal@ntc.net.np : recruit.focusnepal1@gmail.com
६ पारिश्रमिक : संस्थाको नियम अनुसार हुनेछ ।
नोट : म्याद नाघि आएको र रीत नपुगेको दरखास्त उपर कुनै कारवाही हुने छैन । प्रारम्भिक छनौटमा परेका उमे्दवारलाई मात्र लिखित परीक्षामा समावेश गराईनेछ । पदपुर्ति सम्बन्धि सम्पूर्ण अधिकार फाृेकस नेपाल धादिङमा निहित रहनेछ । टेलिफोन सम्र्पकलाई निरुत्साहित गरिनेछ ।
पदपुर्ती समिति, फोकस नेपाल  धादिङ
कर्मचारी आवश्यकता सम्वन्धी सहयात्री समाज नेपालको सूचना
जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङको सूचना
धादिङ अस्पतालबाट क–कस्ले पाउँछ उपचारमा छुट ?
“सम्पुर्ण धादिङ बासीमा स्वास्थ्य कार्यालय धादिङको अनुरोध”
तिमी र म दुवै नालायक
अब नेपाली विमानमा इन्टरनेटको सुविधा